(ဆ)-တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာနှင့် ငွေကုန်ကြေးကျခံတည်ဆောက်ခဲ့သော အသုံးမတည့်ဖြစ်နေသည့် ဝင်းဖနုံ ရေလှောင်တမံဆည်မှရေကို ရေပြတ်လပ်မှုကြီးထွားလာသည့် သံဖြူဇရပ်မြို့သို့ ပို့လွှတ်ပေးရေးစီမံကိန်း တစ်ရပ် ဖော်ဆောင်ပေးပါရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း | Pyithu Hluttaw
(ဆ)-တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာနှင့် ငွေကုန်ကြေးကျခံတည်ဆောက်ခဲ့သော အသုံးမတည့်ဖြစ်နေသည့် ဝင်းဖနုံ ရေလှောင်တမံဆည်မှရေကို ရေပြတ်လပ်မှုကြီးထွားလာသည့် သံဖြူဇရပ်မြို့သို့ ပို့လွှတ်ပေးရေးစီမံကိန်း တစ်ရပ် ဖော်ဆောင်ပေးပါရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့ (၂၇. ၁၁. ၂၀၁၈)
သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်သည် မိုးများရေရှားရပ်ဝန်းတွင် တည်ရှိပါသောကြောင့် မိုးရေချိန်လက်မ ၂၀၀ ဝန်းကျင်ပျမ်းမျှ ရွာသော်လည်း တိုးပွားလာသည့် လူဦးရေနှင့်အညီ ရေအရင်းအမြစ်များ ပျက်စီးလာမှုများကြောင့် သုံးရေရှားပါးပြတ်လပ်မှုကို ရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်တွင် ၁၉၇၁ ခုနှစ် စာရင်းဇယားအရ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၈၅၅၉ ခုရှိပြီး ရပ်ကွက် ၁၀ ခုရှိပါသည်။ တွင်းရေသုံးဒေသတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခုပြောင်းရွှေ့လုပ်သားများကြောင့် လူဦးရေများတိုးပွားလာခြင်း၊ ကမ္ဘာ့ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်လာခြင်းတို့ကြောင့် မတ်လ၊ ဧပြီလ၊ မေလများရောက်ပြီဆိုလျှင် ရေပြတ်လပ်သည့် ဒုက္ခကိုခံစားလာခဲ့ရသည်မှာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု မကပါကြောင်း၊ ရေတစ်စည်လျှင် တစ်သောင်းကျပ်အထိ ရှိပါကြောင်း၊ ရေသယံဇာတ ရှာဖွေပေးနေသော်လည်း အဝီစိတွင်းတိမ်များ ဖြစ်သည့်အတွက် ထိုကာလတွင် ထင်သလောက် လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်သည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ မြို့လူထုသည် အလွန်ပရဟိတစိတ် ရှိကြပြီး တစ်ဦးချင်းသော်လည်းကောင်း၊ အုပ်စုဖွဲ့၍သော်လည်းကောင်း နှစ်စဉ်ရေလှူပေးနေခြင်းများကို တွေ့ရသော်လည်း လုံလောက်မှုမရှိပါကြောင်း၊
သံဖြူဇရပ်မြို့မှ အရှေ့မြောက်ဘက် ၁၀ မိုင်ခန့်အကွာ ဝင်းဖနုံအမည် ရသည့်ဆည်တစ်ခုရှိပါကြောင်း၊ မြေသားတမံအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အလျား ၁၈၀၀ ပေ၊ အနံ ၁၈၀၀ ပေ၊ အနက် ၁၇၈ ပေရှိပါကြောင်း၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးခဲ့ပြီး ရေလှောင်ပမာဏ ၄၉၅၀၀ ဧက ရှိပါကြောင်း၊ ထိုကာလပေါက်ဈေးနှုန်းဖြင့် ကျပ်သန်းပေါင်း ၁၅၃၆.၂၆ သန်း အကုန်အကျခံခဲ့ရပါကြောင်း၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ် မှစပြီး နွေစပါးစိုက်ဧက ၅၀၀၀ ကို ရေပေးဝေရန် ရည်မှန်းခဲ့ပါကြောင်း၊ ၂၀၀၇-၀၈ ခုနှစ် ရာသီတွင်သာလျှင် လျာထားချက် အမီ စိုက်ပျိုးနိုင်ပြီး‌ ၂၀၁၂-၁၃ ခုနှစ်ကစပြီး ယခုအချိန်ထိ လယ်တစ်ဧကမျှ စိုက်ပျိုးခြင်း မရှိတော့ပါကြောင်း၊ ရာသီဥတုကြောင့် မိမိတို့နယ်က နွေစပါးစိုက်ရန် အဆင်မပြေပါကြောင်း၊ ဆည်ကိုလည်း ပြန်ဖျက်မည်ဆိုပါက ရင်းနှီးထားသည့် တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာ ပြန်၍မရနိုင်ပါကြောင်း၊ လက်ရှိအခြေအနေကို အသုံးချနိုင်အောင် ကြိုးစားမှသာလျှင် တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးရှိသည့်ဆည်အဖြစ် ပြန်ပြောင်းလာမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၎င်း ဆည်ရေကို ခေတ်မီရေသွယ် စနစ်ဖြင့် သံဖြူဇရပ်၊ ကျိုက္ခမီမြို့နှင့် ပငကျေးရွာများသို့ ရေသွယ်ယူ၍ အခကြေးငွေယူဖြန့်ဖြူးမှု လုပ်နိုင်ပါက ဆည်တွင်အသုံးတည့်လာပြီး အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ဝင်ငွေပြန်လည်ရှာဖွေ လာနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊
ပထမအကြိမ် လွှတ်တော်သက်တမ်းအစိုးရ၏ စည်ပင်သာယာဌာနက ရေးဆွဲထားပြီးသား စီမံကိန်းအဟောင်း ဖြစ်သော်လည်း JICA ချေးငွေရမှ အကောင်အထည်ဖော်မည်ဟု ကြားနေရပြီး ယခုသက်တမ်း နှစ်နှစ်ထိတိုင်အောင် မည်သည့်အရာမျှ ဖြစ်မလာသည့်အတွက်ကြောင့် ရေရှားဒုက္ခခံစားနေရသော ပြည်သူလူထုအားကိုယ်စားပြု၍ ချေးငွေနှင့်အတိုးပေး အကောင် အထည်ဖော်ရန် မျှော်နေကြမည့်အစား ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရရန်ပုံငွေများဖြင်‌့ ပေါင်းစပ်အကောင်အထည်ဖော် ပေးမည်ဆိုပါကလည်း မည်သို့မည်ပုံနှင့် မည်သည့်ကာလအပြီး ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို ထည့်သွင်းဖြေကြားပေးပါရန် တိုက်တွန်းလျက် မေးမြန်းရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးလှကျော်
မွန်ပြည်နယ်၊ မုဒုံမြို့နယ်အတွင်း မုဒုံ-သံဖြူဇရပ်ကားလမ်း မိုင်တိုင်(၃၁/၆) ၏ အရှေ့ဘက် ဝင်းဖနုံချောင်းပေါ်တွင် ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေး ဦးစီးဌာနက ဝင်းဖနုံ ရေလှောင်တမံကို တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ တည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းထားသည့် ဝင်းဖနုံရေလှောင်တမံမှာ ဆည်ရေသောက်ဧရိယာဧက ၆၅၀၇ ဧကကို နွေစပါးသီးထပ် စိုက်ပျိုးပေးရန်နှင့် ဒေသတွင်းရေကြီးရေလျှံမှုမှ လျော့ပါးသက်သာစေရန်ဆိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်က တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မူလကန်ရေပြည့်ရေလှောင် ပမာဏအနေဖြင့် ဧကပေ ၄၈၀၀၀ ခန့်ကို နှစ်စဉ်ရေသိုလှောင် ထိန်းသိမ်းသုံးစွဲ သွားနိုင်ရန်အတွက် တွက်ချက်စီမံ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရေလှောင်တမံနှင့် ဆက်စပ်ပြီး ရေလွှဲဆည်နှင့် ဆည်ရေသောက် စနစ်ကိုလည်း တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ဒေသတွင်းလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် စိုက်ပျိုးရေပြည့်စုံ လုံလောက်စွာ ပေးဝေနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက် ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊
သို့သော်လည်း ဒေသနေတောင်သူများအနေဖြင့် သမားရိုးကျစိုက်ပျိုးမှုပုံစံအရ မိုးစပါးရိတ်သိမ်း ခြွေလှေ့ချိန် နောက်ကျလာသည့်အခါ နွေစပါးစိုက်ပျိုးမှုနှင့် အချိန်လုပြီးဆောင်ရွက်ရသည့်အခြေအနေ၊ ဒေသတွင် လယ်ယာလုပ်သားရှားပါးလာမှုနှင့်အတူ လုပ်ခကြီးမြင့်ပြီး စိုက်ပျိုးမှုကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားလာသည့်အခြေအနေ၊ လုပ်ငန်းအပေါ် ရင်းနှီးထည့်ဝင်စိုက်ပျိုးနိုင်မှု အားနည်းလာသည့် အခြေအနေများအလျောက် စိုက်ပျိုးသည့်လယ်မြေက သီးနှံအထွက်နှုန်း လျော့နည်းလာပြီး ကုန်ကျ စရိတ်နှင့် အကျိုးအမြတ်တွက်ခြေမကိုက်သော အခြေအနေ အကြောင်းတရားများကြောင့် ဒေသနေ တောင်သူများ နွေစပါးစိုက်ပျိုးရန် စိတ်အားထက်သန်မှု လျော့နည်းလာသည်နှင့်အညီ နှစ်စဉ်နွေစပါး စိုက်ပျိုးမှု နည်းပါးလာသည့် အခြေအနေရှိပါကြောင်း၊
ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေး ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ဝင်းဖနုံရေလှောင်တမံအတွင်း ကန်ရေအပြည့် သိုလှောင်ထားနိုင်မှု၊ တည်ဆောက်ထားသည့် ဆည်ရေသောက်စနစ်နှင့် ရေပေးဝေနိုင်မှု၊ ဆည်ရေသောက်ဧရိယာပေါ် နွေစပါးစိုက်ပျိုးရေ လုံလောက်စွာပေးဝေနိုင်မှု အခြေအနေရှိသော်လည်း အထက်တွင် တင်ပြဖြေကြားခဲ့သည့်အတိုင်း တောင်သူများအပိုင်းမှ အခြေအနေအရပ်ရပ်အပေါ် မူတည်ပြီး ဝင်းဖနုံရေလှောင်တမံ၏ အကျိုးပြုနိုင်စွမ်းကို ထိရောက်စွာ အသုံးချနိုင်ရန် အားနည်းချက်များ ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဆည်သည် ကန်ရေအပြည့် သိုလှောင်ထားနိုင်မှုအရ ဆည်ရေသောက်ဧရိယာ ၆၅၀၇ ဧကအတွက် စိုက်ပျိုးရေလုံလောက်စွာ ပေးဝေနိုင်သည့်အပြင် ဒေသတွင်းသောက်သုံးရေ အတွက်လည်း အခက်အခဲမရှိ လုံလောက်စွာ ပေးဝေနိုင်သည့် အခြေအနေရှိပါကြောင်း၊ လက်ရှိအခြေအနေတွင် ဝင်းဖနုံရေလွှဲဆည်မှ မုဒုံမြို့နယ်၊ နှီးပဒေါကျေးရွာနှင့် ကလော့သော့ကျေးရွာများတွင်ရှိသည့် လူဦးရေ ၅၀၀၀ ကျော်အတွက် သောက်သုံးရေကို နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှဂါလန် ၄၇ သန်းခန့် ပေးဝေလျက်ရှိပါကြောင်း၊
ဝင်းဖနုံရေလှောင်တမံမှရေကို ၁၀ မိုင်ခန့်ကွာဝေးသည့် သံဖြူဇရပ်မြို့၊ ရေပြတ်လပ်မှု ကြီးထွားလာသည့် အခြေအနေကို ကုစားပေးနိုင်ရန် ထိုမှတစ်ဆင့် ၁၅ မိုင်ခန့်ကွာဝေးသော ကျိုက္ခမီမြို့ကို သောက်သုံးရေပေးပို့ရာတွင် စိစစ်မှုများအရ လုပ်ငန်းပမာဏ ကြီးမားပြီး ကုန်ကျစရိတ်လည်း လွန်စွာများပြားမည် ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီး ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ (JICA) မှ ချေးငွေစီမံကိန်းတစ်ရပ်ရယူပြီး လုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားရန်အတွက် စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ JICA (ODA Loan) ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် ဒေသတွင်းဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်းကို ၎င်း၏ Loan Agreement ဖြင့် ချေးငွေသဘောတူချက် ကို ၁-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုး ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အဆိုပါ စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သည့် မြို့ရေပေးရေး စီမံကိန်းအဆင့် (၂) လုပ်ငန်းများကို ၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ စီမံကိန်းကာလ လေးခုဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားရန်အတွက် လျာထားပါကြောင်း၊ စီမံကိန်းတွင် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ကိုးခုရှိ မြို့နယ် ၂၂ မြို့ရေရရှိရေး လုပ်ငန်းလည်းပါဝင်ပါကြောင်း၊ မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်နှင့် သံဖြူဇရပ်မြို့ရေရရှိရေး လုပ်ငန်းများပါဝင်ပြီး သံဖြူဇရပ်မြို့ သန့်ရှင်းသည့် သောက်သုံးရေရှိမှုအတွက် ဝင်းဖနုံဆည်ရေကိုရယူပြီး ဆောင်ရွက်သွားမည်လည်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အဆိုပါလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အကြံပေးအဖွဲ့က ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဒီဇိုင်း လုပ်ငန်းများ အပ်နှံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို စီမံ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊
မွန်ပြည်နယ်ကို ဂျပန်နည်းပညာ အကြံပေးအဖွဲ့ကပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ပထမအကြိမ် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက် အပေါ်မူတည်ပြီး ဆက်လက်ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက် သွားနိုင်ရေးအတွက် တင်ဒါခေါ်ခြင်နှင့် ရရှိထားသည့် ဒီဇိုင်းအတိုင်း တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန်အတွက် ၂၀၁၉-၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် တင်ဒါခေါ်ယူနိုင်ရေး လျာထားဆောင်ရွက်ထားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ရှင်းလင်းဖြေကြားပါသည်။